Tontolo_iainana · Jona, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Tontolo_iainana · Jona, 2017
Tantara mikasika ny Tontolo_iainana tamin'ny Jona, 2017
Erantany: Mamono Jiro, Ho An'ny Planeta
Amerika Latina 30 Jona 2017
Nasehon'ny tontolon'ny bilaogy avokoa ny fisehon'ireo fihetsika rehetra, nanomboka teo amin'ny fanantenana sy ny fanohanana ka hatramin'ny tsikera sy ny fanomezana henatra.
Iran: Fanentanana Ataon'ny Bilaogera Hiarovana Ny Faritra Mando
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 30 Jona 2017
Manana tontolo iainana faritra mando lehibe sy maro karazana i Iran saingy indrisy fa ao anatin'ny toe-javatra mampahonena ny sasany amin'izy ireo. Bilaogera sy mpanao gazety maitso marobe no mihevitra fa tsy miraharaha momba ireo faritra mando ireo ny governemanta Iraniana.
Fandresen'ny Fikatrohan'ny Olom-pirenena Rehefa Nangatahan'ny UNESCO ny Hampiatoana Ireo Tetikasa Fanorenana Rehetra Ao Amin'ny Farihy Ohrid
Eoropa Afovoany & Atsinanana 29 Jona 2017
Ny Farihy Ohrid ao Makedonia no farihy tranainy indrindra ao amin'ny kaontinanta Eoropeana kanefa nikasa hanova ny faritry ny vakoka natoraly ho toeram-pialamboly goavana ny governemanta teo aloha .
Kenyà : Liona Voampoizina Tamin'ny Fanafody Famonoana Bibikely
Kenyà 29 Jona 2017
Mizara ny filazana an-gazety feno ao amin'ny Bilaogy Baraza ny Dr Paula Kahumbu, ary mitanisa ny trangana fampiasana ny Furudan mba hamonoana ireo karazana bibidia rehetra i Martin Odino, ao amin'ny blaoginy Stop Wildlife Poisoning, hita ao amin'ny vavahady WildlifeDirect.org.
Etazonia: Herinandro Ho An'ny Tantaran'ny Hazondrongony, Mamonjy Zanakazo Sy Planeta
Amerika Avaratra 28 Jona 2017
Anatinà vanim-potoana sarotra ara-toekarena, inona no antony mety handraràna ny fambolena mitodika amin'ny indostria ny zanakazo iray tena ilaina sy ahazoana tombontsoa, izay saika tsy mila fanafody famonoana bibikely?
Ekoadaoro: Misaona Ny Fahafatesan'Ilay Zirafy Chelito Ny Mponina
Amerika Latina 28 Jona 2017
Fanta-daza noho ny karazan-javamananaina maro sy mirehareha amin'ny karazan-javamaniry mahaliana sy biby maro i Ekoatera . Na izany aza, misy biby tsy tompotany ao amin'ny firenena iray tena ankafizin'ny olona ao, ary misaona ny fahafatesany vao haingana ny mponina tao Loja .
Iran: Bilaogera Mihetsika Ho An'ny Zon'ny Biby
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 26 Jona 2017
A number of bloggers are supporting an initiative by Iran-based blogger Mino Saberi, to defend the rights of dogs, birds, cats, and other creatures of the Earth. The mistreatment of animals is common in Iran, and bloggers are asking national television to stand up for their rights. Maro ny bilaogera no nanohana ny hetsika nataon'ny bilaogera monina ao Iran Mino Saberi , mba hiarovana ny zon'ny alika, ny vorona, ny saka, sy ny biby hafa eto ambonin'ny tany. Fahita ao Iran ny fampijaliana ny biby, mijoro ho an'ny zon'ireo biby ireo ny bilaogera sy ny fahitalavim-pirenena.
Herintaona Mahery Taty Aoriana, Misoroka Ahitra Ao Amin'ny Toeram-ponenana Nasiana Azy Ao Myanmar ireo Niharan'ny Fihotsahan'ny tany
Azia Atsinanana 23 Jona 2017
"Taona iray taorian'ny fametrahana azy ireo, vao ny herinaratra fotsiny no azon'ireo mponina fa tsy mbola manana rano mikoriana. Tsy maintsy miantehitra amin'ny fanangonana ranon'orana sy ireo fanaterana ataon'ireo vondrona mpanampy ao an-toerena izy ireo"
Sary Mampiseho Ny Hatsaran-tarehin'ny Lolo Ao Nepal
Azia Atsimo 23 Jona 2017
Jereo akaiky ny karazany, ny teboka, ary ny lokony amin'ny alàlan'ny sarin'ilay mpaka sary Susheel Shrestha.
Oman: Ny Fahavoazana Taorian'ny Rivodoza Phet
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 22 Jona 2017
Namely an'i Oman andro vitsy lasa izay ilay rivodoza tropikaly Phet izay niforona avy any amin'ny Oseana Indianina. Ity no rivodoza lehibe faharoa izay nandalo tao Oman tao anatin'ny telo taona. Mitatitra momba ny fivoaran'ny zava-misy ny bilaogera ato anatin'ity lahatsoratra ity.